मिलेमतोमा वारिबाट पारी मदिरा तस्करी ! « Drishti News – Nepalese News Portal
मिलेमतोमा वारिबाट पारी मदिरा तस्करी !
५ बैशाख २०७८, आइतबार 7:21 am
कुनै बेला अँध्यारोको आड लिएर तस्करले भारतबाट कुखुरा भित्र्याउने सिरहाको सीमावर्ती नाका पछिल्लो समय मदिरा तस्करीको मुख्य केन्द्र बनेको छ। तस्करले वारिका सुरक्षाकर्मीसँगको सेटिङमा नेपाली बजारबाट मदिरा सीमावर्ती बजारमा भण्डारण गरेर अनुकूल समयमा पारिका सहरमा पुर्‍याउँदै आएका छन्।
दिउँसै सिरहाको माडर बजारमा मदिराको सक्कली कार्टुन (मदिरा उद्योगबाट सिल भएर आएको) फ्याँकी बोतल अर्को कार्टुनमा प्याक गरी बोरामा राखेर साइकलमार्फत सीमावर्ती लगडीगोठ र बुधौरा पुर्‍याइन्छ। ड्युटीमा रहेका एसएसबीहरू खाजा समयमा ब्यारेक फर्केका बेला धमाधम मदिराले भरिएका बोरा पारि पुर्‍याइन्छन् ।
सिरहाबाट भारततर्फ खुलेआम मदिरा तस्करी हुँदै आए पनि जाँचका लागि सीमाक्षेत्रमा उपस्थित सशस्त्र र नेपाल प्रहरी भने देखे पनि नदेखेझैं गर्दै आएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय माडरभन्दा ५ सय मिटर पूर्व लगडीगोठ जाने सडकको उत्तरपट्टि खुला ठाउँमै मदिराका बोतल नयाँ कार्टुनमा प्याक गरिरहने दृश्य स्थानीयका लागि समान्य हो ।, यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।